DEG DEG:- Xaaladda Gaalkacyo iyo rasaas goos-goos ah oo haatan laga maqlayo galbeedka magaaladaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Xaaladda Gaalkacyo iyo rasaas goos-goos ah oo haatan laga maqlayo galbeedka magaaladaas
Wararka saakay naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in goordhaw uu halkaasi ka bilawday rasaas goos-goos ah oo ay magaaladaasi isku dhaafsanayaan ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland.
Rasaastaasi oo haatan weli la maqlayo ayaa waxaa is-dhaafsanaya ciidamada Galmudug iyo kuwa Puntland oo la sheegayo inay weli isku hor-fadhiyaan galbeedka magaalada Gaalkacyo.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo oo maalmihii ugu dambeysay iska deganayd, ayaa maanta u muuqata mid faraha la galeysa dagaalo iyo colaado, oo u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland, mana jirto weki wax waan-waan ah oo labadaasi dhinac lakala dhex dhigay.
Dhinaca kale, odayaal dhaqameed iyo waxgarad kasoo jeeda labada dhinac ayaa muddooyinkii ugu dambeeysay soo saarayay baaqyo ku aadan in la joojiyo dagaalada, islamarkaana wixii khilaaf ah oo labada dhinac u dhaxeeyo lagu dhameeyo miiska wada-hadalka.
Dadkii hore uga barakacay magaalada Gaalkacyo ayaa maalmihii ugu dambeysay dib ugu soo laabanayay guryahooda, iyadoona haatan ay dadkaasi lasoo deristay cabsi horleh maadaama ay rajeynayeen in heshiis laga gaaro colaadaha.
Ugu dambeyntii, goobaha ganacsi ee ku yaalo magaalada Gaalkacyo ayaa saakay ah mid caadi ah, islamarkaana ganacsiga halkaasi uu yahay mid si caadi ah u socdo.